Xaafiiska Farmaajo oo kala furfuraya Ciidanka Xoogga Dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Xaafiiska Farmaajo oo kala furfuraya Ciidanka Xoogga Dalka
Ciidamo ka tirsan XDS ayaa oo ka soo baxay jiidda dagaalka Shabeellaha hoose, ayaa galabta galay Madaxtooyada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo ka tirsan kuwa Xoogga Dalka Soomaaliya, oo ka yimid gobolka Shabeellaha hoose, ayaa galabta soo galay magaalada Muqdisho, waxa ayna ku xaroodeen Madaxtooyada Soomaaliya.
Ciidankaan oo wata ku dhawaad 10 gaari oo nuuca dagaalka ah, ayaa galabta magaalada ka soo galay wadada dheer ee aadda Shabeellaha hoose, waxayna abaareen Madaxtooyada oo la soo warinayo in laga wado qorshe lagu kala furfurayo ciidanka Militariga ee diiday muddo kordhintii Farmaajo.
Sida caadiga ah, Ciidamada ka yimaada gobollada Shabeelooyinka, ayaa inta aysan u gudbin magaalada soo mara Waraasadda Gaasaandhigga, hayeeshee, ciidankaan oo ka soo dhacay Ex-Koontarol Afgooye oo tood ugu gudbay Villa Soomaaliya.
Warar ay heshay Keydmedia Online, ayaa xaqiijinaya in Xaafiiska Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo, uu wado dalaal xooggan oo la doonayo in lagu burbiriyo xiriirka ciidamada iyo saraakiisha ka howl-gala labada Shabeelle.